Kooxda Manchester United oo la kulantay Wakiillada Thomas Lemar… (Maxaa laga wadahadlay?) – Gool FM
Kooxda Manchester United oo la kulantay Wakiillada Thomas Lemar… (Maxaa laga wadahadlay?)
(Manchester) 21 Mar 2020. Kooxda Manchester United ayaa la warinayaa inay la kulantay wakiillada Thomas Lemar isbuucii la soo dhaafay si ay ugala hadlaan suurtogalnimada ay ugu dhaqaaqi karaan Weeraryahanka Atletico Madrid xagaagan.
Lemar ayaa si weyn ugu dhibtooday inuu waqti fiican ka sameeyo Atletico tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Monaco 2018, wuxuuna ku fashilmay inuu wax gool dhaliyo kaliya 24 gool ayuu caawiyay tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan.
24-sano jirkan ayaa sida la sheegay loo ogolaaday inuu ka tago garoonka Wanda Metropolitano inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, waxaana sida laga soo xigtay ESPN, Man United ay la xiriirtay si ay ugala hadlaan heshiis dhici kara.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay aaminsan yihiin in ‘Cagtiisa midig iyo hal-abuurka Lemar uu faa’iido u noqon karo kooxda’ inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka 2020-ka.
Arsenal ayaa sidoo kale la la xiriirinayay Lemar bishii Janaayo, inkastoo aysan caddeynin in Gunners ay isku dayi doonto inay hubiso saxiixiisa xagaagaan.
Xiddiga reer France ayaa la dhibtoonayay dhibaato muruqa ah toddobaadyadii la soo dhaafay, qandaraaska uu kula jiro kooxda Diego Simeone ayaana ku eg dhammaadka xilli ciyaareedka 2022-23.
UEFA oo raali-galin ka bixsay jaha-wareer ay ku abuurtay Jamaahiirta kubadda cagta